26 May, 2019 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Kadib markii Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya ay soo saartay habraaca Guud ee doorashada Dowlad Goboleedyada ayaa waxaa kasoo horjeestay Maamulka Hir-Shabeelle oo noqday Maamulkii labaad ee qaadaca.
War-Saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Maamulka Hir-Shabeelle ayaa walaac looga muujiyay Go’aanka Wasaaradda Arrimaha gudaha,waxaana lagu sheegay in habraacaas uu yahay mid baalmarsan nidaamka federaalka iyo midka dimuqraadiyada.
Sidoo kale War-Saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ay ka hor-imaaneyso Dastuurka Federaalka iyo shuruucda kale ee dalka u taalla.
Maamulka Galmudug ayaa si la mid ah uga soo horjeestay Go’aanka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya kasoo baxay,iyada oo weli wax jawaab ah aysan ka bixin Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya.
Hoos Ka Akhriso War-Saxaafadeedka kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Maamulka Hir-Shabeelle.
Akhriso:-Wararkii ugu dambeeyay ee Arrimaha doorashooyinka Jubbaland
Wasiirka arrimaha Gudaha oo maanta tagaya Dhuusamareeb
Shir Saxaafadeedkii Wasiirka Arrimaha dibadda oo baaqday